प्रश्न विमल गुरूङलाई गरौं - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारप्रश्न विमल गुरूङलाई गरौं
प्रश्न विमल गुरूङलाई गरौं
January 8, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार, म्यागजिन 0
दिँदै नदिने केन्द्र सरकारको भरोसामा बसेर पहाड़मा अग्निकाण्ड, बम काण्ड र तोड़फोड़ गर्नु भन्दा राज्य सरकारसंग मिलेर कार्य गर्न नै बुद्धिमत्ताको काम हो। अहिले पनि विमल गुरूङको मोदी सरकारले चाहे अलग राज्य हुनसक्छ तर केवल विमल गुरूङ र उनको समुहले बिनय र अनित थापालाई विभिन्न आरोप र हिलो छेप्ने कार्य मात्र गरिरहेका छन्।
जनताले 2007 देखि 2017 सम्म विमल गुरूङलाई साथ नदिएको होइन तर विमल गुरूङले जनताको निम्ति के गरे यो प्रश्न दावा लेप्चाले विमल गुरूङलाई नै सोधे असल हुनेछ। 2007 देखि 2011 सम्म गोर्खाल्याण्ड कै निम्ति विमल गुरूङलाई जनताले साथ दिएका थिए तर किन 2011मा जनताको इच्छा बिरूद्ध जीटीए थापे।
ममता व्यानर्जीलाई आमा भन्ने अरू कोही होइन विमल गुरूङ नै हुन्। आजको दिनसम्ममा विमल गुरूङ अनि उनका समूहले ममता सरकारसँग भेट्ने बात गर्ने कुरा चार-चार पल्ट गरेको बयानहरू मिडियामा सार्वजनिक भइसकेको छ।
जीटीए त्याग्दै फेरि जीटीएमा नै बस्ने विमल गुरूङको पुरानो आदत थियो जसको उदारण 2013 मा उनले जीटीए छोड़ेर फेरि दुइ महिनापछि नै जीटीए चीफको सपथ कलकत्तामा गएर किन लिए?
यो प्रश्न पनि विमल गुरूङलाई सोधेको राम्रो, जनतालाई होइन। 2017 मा 104 दिने बन्दमा किन पात्लेबासदेखि दार्जीलिङ शहरसम्म पनि चढ्न डराए? आफैलाई साहसी नेता भनेर हुङ्कार पिट्ने विमल गुरूङले पार्टीको साधरण जनता र कार्यकर्ताहरूले पुलिसको तातो गोली थाप्दा उनी कहाँ थिए?
2007 मा आफू कुनै पनि चौकीमा बस्दिन भन्ने विमल गुरूङ किन दुइदुइपल्ट आफै जीटीएको चीफ बने? किन आफ्नै स्वास्नी र ज्वाईँ र पुरै सन्तानलाई नै जीटीएको सभासद बनाएर जीटीएको डिपार्टमेन्ट दिए?
यो प्रश्न जनतालाई होइन विमल गुरूङलाई सोधे असल हुन्छ।
गोर्खाल्याण्डको निम्ति आमरण अनशन बस्छु भन्दै जनतालाई लट्याए तर के उनी आमरण अनशन बसे?
विद्यार्थी मोर्चाबाट स-साना विद्यार्थीहरू अनशन बस्दा उनको छोरा र छोरीलाई किन अनशन एकै दिन पनि राखेनन्? यो प्रश्न पनि विमल गुरूङलाई सोधे हुन्छ।
विमल गुरूङले केवल झण्डाको राजनीति गरे। 2017 मा सबै पार्टीहरू एक हुँदा “अल पार्टीको च्यापटर क्लोज” किन भने? जब जीएमसीसीको सभामा अल पार्टीबाट नै गोर्खाल्याण्डको निम्ति आमरण अनशन बस्ने भएका थिए। गोजमुमोबाट बिनय तामङ, गोरामुमोबाट निरज जिम्बा, सीपीआरएमबाट आरबी राई। तर किन हतार-हतार विमल गुरूङले युवा मोर्चालाई अनशन राखे?
अनि किन सांसद अहालुवालियाहको एक फोनमा अनशन उठाए?
यो प्रश्न जनतालाई होइन विमल गुरूङलाई सोध्नपर्छ।
वास्तवमा दावा लेप्चालाई जनतालाई प्रश्न सोध्ने नैतिक अधिकार छैन। उनले कालेबुङ साङ्गठानिक सचिव भनेर बयान जारी गरेका छन् तर उनी विमल गुरूङको साख्खे ज्वाईँ हुन् अनि ज्वाईँले विमल गुरूङ जेठूको पक्षमा बोलेर आफ्नो आफन्तको जिम्मेवारी मात्र निभाएका हुन्।
पहाड़मा सबै गोर्खाल्याण्डको निम्ति आन्दोलित बनेका थिए अनि विमल गुरूङले आफैलाई मोदीको नजिकको मानिस हुँ भन्दै थिए। बिगत लोकसभा चुनावमा मोदी खोप्रेलमा चुनाव प्रचारको निम्ति आउँदा मोदीसँग मोदी कै हेलिकेप्टरमा चढेर एयरपोर्टसम्म जाँदा त्यसताक विमल गुरूङले मोदीलाई मोदीको सरकार आए पछ्यात गोर्खाल्याण्ड गठन गरिदिन्छ भनेर जनता सामू भाषण गर्ने विमल गुरूङ नै हुन्।
तर मोदीको सरकार आए अनि अब त मोदीको सरकार जाने बेला पनि भयो तर खोइ गोर्खाल्याण्ड? विमल गुरूङलाई यो पनि प्रश्न।
एक महिना अघि मात्र यो शितकालीन सत्रमा 11 जातिलाई जनजातिको मान्यता दिन्छ भनेर विमल गुरूङको निर्देशमा रमेश आले, अनिल लोप्चनहरू बोलेका थिए त खोइ जनजातिको मान्यता पाएको? यो पनि प्रश्न विमल गुरूङलाई।
भाजपाले र विमल गुरूङ केवल जनतालाई छक्याउने कार्य मात्र गऱ्यो। 104 दिन त 208 दिनै पहाड़ बन्द गरेको भए पनि हुनेवाला केही थिएन। हामी माग्नेहरू तयार थियौं तर दिने विमल गुरूङको मोदी सरकार तयार नै थिएन। यसैले यो कुरोलाई बिनय तामाङ र अनित थापाले बुझेर पहाड़लाई नै बचाउने कार्य गरेका हुन्।
विमल गुरूङको कुबुद्धिमा लागेर विभिन्न कानूनी मुद्दा लागेर जेल परेका पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई रिहाई गराउने कार्य बिनय तामाङ र अनित थापाले गरे।
अलग राज्य बिनय तामङ, अनित थापा र ममता व्यानर्जीले बनाउन सक्तैनन्। विमल गुरूङको अहालुवालिया र मोदी सरकारले सक्छ। यसोस्ले बिनय तामङ र अनित थापालाई हिलो छेप्नु भन्दा मोदी सरकारलाई भाजपालाई पहाड़ले दुइवटा दुइपल्ट सांसद दिएको नातामा विमल गुरूङले मोदीमाथि चाप सृष्टि गरून्। र अलग राज्य गठन गरून् जसको हामी स्वागत गर्छौ। तर त्यो सब विमल गुरूङले कहाँ पो गर्न सक्छन् र? कायर बनेर जनतालाई अलपत्र पारेर भाग्ने नेता हुन विमल गुरूङ। अनि अब त उनको राजनीति पनि केवल फेसबुक र वाट्सएपसम्म मात्र सिमित रहेको छ।
के विमल गुरुङ गलत छन्?
नगराध्यक्ष रवि प्रधानमाथि आक्रमण गर्ने नगरपार्षद कुणाल प्रधानलाई मोर्चाले पठायो सोकज नोटिस : रवि प्रधानले न्याय नपाए हाट बजार सङ्गठन सडक उत्रने
झाऱ्यो सेनाः सीआरपीको छापामारी जारीः सिंहमारीमा फाइरिङ-फेरि एकको मृत्युः जम्मा तीनको मृत्यु (36,103)
अनिश्चितकालीन बन्द जारीः ‘हामी यो पाली पनि चुक्यौं भने एक चम्ची पानीमा डुबेर मर्दा हुन्छ’- विनय तामाङ (25,048)
बङ्गालको विरोधमा उत्रियो मिजोरम (20,998)
पिसाबमा रगत बग्न थाल्यो, तरै पनि अनशनकारीहरू भन्छन्, दबाई होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ (19,957)